Ady lalao roa mpilalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Ady lalao roa
Boy, dia maimaim-poana lalao miady ho roa-tserasera. Vorio miaraka amin'ny namana sy ny mandamina fifaninanana ao amin'ny tontolon'ny aterineto. Ao amin'ny tontolo virtoaly, dia afaka nikapoka ny milina izay nampiofanina mba hanohitra. Na afaka milalao amin'ny mpanohitra velona. Mila mba hizara, iza no maka ny toeran'ny fanalahidin'ny ny zana-tsipìka, ary iza no mitana ny taratasy. Ankehitriny dia afaka soa aman-tsara, ary manomboka milalao eny an-dalana hiady ady na fanatanjahan-tena.
TMNT: Kickin 'izany Old Sekoly
Ady amin'ny ady antonony
Ady amin'ny Internet
Fiadiana Mahery Fo 3
Very Maina mamo-Fu Masters
Adventure Island Ultraman 2
Mpiady mahery mamono olona
Robot Ring Miady Lalao Wrestling
Robot dinôzôro Ady Megalosaurus
Viking Wars 2 Harena
Vehivavy tena mitolona amin'ny ady amin'ny Ring
Ady eran'izao tontolo izao
Ady amin'ny ady ara-pitsarana Jurassic Fight Club
Tanànan'i Smashy: Monina
Tiger Real Strike Fighting
Robot raha tsindronina Dragon
Fifaninanana Grand Slap Master Kings 2020
Tsy misy famindram-po ho an'ny zombies
Fahafaham-po ny ady totohondry
Lozanao - 2 mpilalao fotsiny
Espaniola an'i Janissary
Ady amin'ny ady
Handao 'Em Up
Lalao Niady ho roa tamin'ny Category:
Farany Ady lalao roa
Ady tehamaina mamo
Ny tontolo mahagaga an'ny mpiady kebab Gumball
Lalao Multiplayer Fighting an-tserasera
Ady amin'ny duel stick
Lalao Online Rehetra Ady lalao roa mpilalao an-tserasera
Nientam-Avoty ho an'ny lalao roa
Inona avy ireo lalao roa ady tsy sarotra ny maminavina avy amin'ny anarana. Mpandray anjara roa dia oharina amin'ny herin'ny lalao sehatra virtoaly, mampiasa ny totohondry na fitaovam-piadiana. Fa isan-karazany, isan-karazany ianao nanolotra toe-javatra, izay dia ilaina ny hanafaka olona iray, na ny mihaza ny fahavalo, ka amin'ity tranga ity mahaliana kokoa mba hiatrehana ny tena fahavalo fa tsy ny solosaina Bot.
Tsy maintsy mahatakatra ny fiandohan'ny dingana, inona no fanalahidy mba hifehy ny mahery, fampijalian kapoka, manao jumps, somersaults, dia mampandamòka. Ohatra iray ny olona roa dia ho fitaovam-piadiana izay hisolo:
Ary ny antsy,
ny sehatry ny angovo.
Fifantenana tany io kosa Eleazara
Izany faritra dia manolotra safidy maro Inona no toe-javatra sy ny fomba hiady. Tia kokoa ny mpitolona asa, dia hanatona ny ady ny samouraï, izay deftly mihetsika sy hahatonga ny helatra ho amin'ny fahavalo fitokonana. Izy ireo miaramila fiofanana izay honed ny fahaiza-manao fanatanjahan-tena lava, ary dia ilaina ny ampy ny ambaratonga, mandray ny raharaha.
teo an-tokotany mpampijaly kely tsy mankahala improvised fitaovana, ary teny an-tànany nanelatrelatra biriky, nanapaka fantsona, kibay, trano fisotroana. Izy ireo masiaka famakiana ny tolona ho amin'ny faritany, ary hitanao fa tratra izany toe-javatra mampidi-doza. Mihemotra taty aoriana, raha mihazakazaka ny dingana, ka noho izany fanapahan-kevitra hentitra hanao zavatra mahery vaika ary.
Ho tonga koa manerana ny Mafia showdowns, izay ny antoko tsirairay te hahazo fanaraha-maso ny orinasa. Nandritra ireo fepetra hentitra, ankoatra ny fitaovam-piadiana, ary azo ampiasaina fanaka - farango, boaty, mitondra fitaovana. Maro ny andinin-tsoratra masina sy ny zavatra isan-karazany ho toy ny fialofana amin'ny fahavalo bala. Raiso ny nitifitra ary niaraka tamin'izay dia hiafina, mihetsika mba hitady miafina vaovao.
Fanatanjahantena, koa, dia manana toerana ao ity sokajy ity. Martial Arts Anisan'izany ny fahafahana hanana antsibe sy ny hafa miandry anao ny ora vitsivitsy ny mahafinaritra-Casino nandritra ny lalao ho an'ny ady roa. Indrindra liana amin'ny mpilalao miaraka amin'ny ody ny tantara, ka manasa anao ho any amin'ny nofinofy izao tontolo izao, izay niady antoko ampiasaina amin'ny ady ny hery mahagaga. Dia hanipy afo samy hafa ny tontolon'ny fonosam-hery, fahefana onjan-dranomasina, feon'ny onja dia taitra, Nandondòna teo naniraka ka hanome harena ara-tsaina amin'ny zavatra tsy mahazatra fananana. Ny mahery fo mifaninana ho ny mpitarika ekipa na hiady ho an'ny fireneny. Mifidy ny lafiny tsara tarehy sy hiaro ny zony.
Aza miady eny, ary ny sarimiaina mpandray anjara. Indraindray mahafinaritra hanaovana azy fa tsy ratsy fanahy izy. Ohatra, Mickey Mouse amin'ny namana momba ny fanentanana anareo namana - Goofy sy Donald, nanao ondana fa miady lava ny tokantrano sy ny zavatra hafa. Mahafinaritra be izy ireo, ka nahoana no tsy hiaraka aminay sy mizara ny fifaliana? Manangona hevitra fa marina Hits, araraoty ilay lavo entana restocking "fitaovam-piadiana", ary handresy.
Tena mampitolagaga ady no azo rehefa tafiditra Marvel boky tantara an-tsary mahery fo. Tsirairay dia faran'izay mahery fo manana ny hery tsy manam-paharoa, ary tsy maintsy ho afaka hanohitra azy, repulsing ny fanafihana sy ny fampijalian ny mamely. Mandray anjara amin'ny ny zavarushku mora kokoa ny mianatra ny fahalemeny sy ny tanjaka.
ny mety ho lalao roa
Na dia ny lalao nanome iray lomisy ny mpilalao, ary milaza ny fisian'ny mpiara-miasa ao amin'ny gameplay, fa izany no tsy maintsy. Afaka tanteraka mivoaka hanatona ny dingana amin'ny toerana tena mitokana, milaza fotsiny voalohany izay mandeha eo amin'ny an'ady ihany. Amin'ity tranga ity, ny fandaharana dia handray ny andraikitry ny mpifanandrina ary hitantana azy mandritra ny hetsika manontolo. Koa satria ny solosaina - mandroso mpanohitra, milalao dia ho mahaliana ihany koa.